ပ႐ုပ္လုံးနံ႔ေလး ေမႊးေနတ့ဲ အဝတ္အထည္ ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ – WunYan
ပ႐ုပ္လုံးနံ႔ေလး ေမႊးေနတ့ဲ အဝတ္အထည္ ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္
ပ႐ုပ္လုံးရဲ႕ အာနိသင္ကိုက တေျဖးေျဖးလုးံပါးပါးၿပီး အေငြ႔ ပ်ံတာေလ။ ပ်ံတ့ဲ အေငြ႔ ေတြက အေပၚက ေျပာတ့ဲ ဓာတုဓာတ္ေတြေပါ့။
Source : Child Health Myanmar
ပရုပ်လုံးနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ အဝတ်အထည် တွေရဲ့ အန္တရာယ်
အဝတ်အထည် လေးတွေ ပရုပ်လုးံနံ လေး သင်းနေအောင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ရန့ံလေး၊ ပိုးမွှား တွေတက်မှာလဲမပူရအောင်ဆိုပြီး ပရုပ်လုံးတွေကို ရှိသမျှ အဝတ်ဗီရို၊မွေ့ယာ၊စောင်တွေသိမ်းတဲ့နေရာ၊သားသား မီးမီး တို့ရဲ့ အဝတ် ခြင်းတောင်း တွေထဲမှာ ထည့်ကြတာ ဆန်းတာလုပ်လို့ ပြောစရာရှိတယ်။ ဘာများ မှားပြန်ပြီလဲပေါ့။
ပရုပ်လုံးရဲ့ အာနိသင်ကိုက တဖြေးဖြေးလုးံပါးပါးပြီး အငွေ့ ပျံတာလေ။ ပျံတဲ့ အငွေ့ တွေက အပေါ်က ပြောတဲ့ ဓာတုဓာတ်တွေပေါ့။
စူးစူးရှရှနဲ့ သင်းပျံတဲ ရန့ံ လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အငွေ့တွေက သားသား မီးမီး တို့အပြင် လူကြီးတွေရော ၊ကလေးငယ်၊ဖိုးဖိုးဖွားဖွား အားလုးံရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အဆိပ်ငွေ့ သဘောပါပဲ။ ဖြေးဖြေးချင်း သူလဲလုးံပါးပါးရင်း ကိုယ်ကိုလဲထိခိုက်နေတာပေါ့။
ခုခေတ်မှာ ပရုပ်လုးံ ဖြူဖြူလေးတွေတင်မကတော့ဘူး၊ အရောင်စုံ ဒီဇိုင်းစုံ နဲ့ဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံ မျိုးစုံစျေးကွက်ထဲမှာပေါ်နေပါတယ်။
ပရုပ်လုးံမ သုံးရင် အန့ံတွေ ပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ပိုးကောင် တွေပြေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ပရုပ်လုးံဝယ်ရင် အထက်က ပြောတဲ့ ဓာတုနာမည်ပါတာဆိုရင် ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။